Inani lokuQinisekiswa kweminyaka eli-10 kunye neNgqungquthela yeHlabathi eKhethekileyo
Ikhaya Inani lokuQinisekiswa kweminyaka eli-10 kunye neNgqungquthela yeHlabathi eKhethekileyo
Nge-Julayi 2020 ibonakalisa inyanga emangalisayo ye-TRF, ngeeprojekthi ezimbini eziphambili zamanye amazwe ezizayo. Sixhasa ukunyanzeliswa komthetho wokuqinisekisa iminyaka yamanyala e-UK nakwihlabathi liphela ngeNgxelo yeNkomfa yokuQinisekiswa kobudala. Kwangelo xesha, sinegalelo kwizinto ezininzi kwingxoxo-mpikiswano yehlabathi malunga nemifanekiso engamanyala ngokuthatha inxaxheba kwi-2020 Coalition yokuphelisa ingqungquthela yokuxhaphaza ngokwesondo.
Isiseko soMvuzo sithatha inxaxheba kwi-2020 Coalition yokuphelisa ukuSetyenziswa kweSondo kwiNgqungquthela ye-Intanethi phakathi kwe-18 ne-28 kaJulayi. Sibonelela ngeentetho ezintathu: Iphonografi kwi-Intanethi kunye neBongo yaBafikisayo; Iphonografi kwi-Intanethi kunye naBasebenzisi abanokuPhazamiseka kwi-Autistic Spectrum kunye neeMfuno eziZodwa zokuFunda; kunye neMephu yendlela yoPhando lwexesha elizayo kwiNgxaki yezoonografi Sebenzisa. Izithethi ezili-177 kunye nabantu abangaphezu kwe-18,000 abasuka kumazwe angaphezu kwayi-100, sesona siganeko sikhulu esakha senzeka kule ndawo.
Iindaba ezimnandi zezokuba le nkomfa ISIMAHLA ukubakho. Ukuba oku kubamba umdla wakho, cofa Apha ukubhalisa namhlanje kwaye usijoyine kule mava amangalisayo.
I-Intanethi ye-Intanethi kunye neBraincent Brains
UMary Sharpe sisithethi senkomfa esibonakalayo kwingxoxo enkulu yosuku lwe-27 kaJulayi.
Isiseko soMvuzo siqhuba iSiboniso sokuBonisa kule nkomfa. Kukho ukhuphiswano lokuphumelela enye yeekopi ezintlanu zencwadi kaGary Wilson -Ingqondo yakho kwi-Porn.
23/24 Julayi 2020
27/28 Julayi 2020
Ukuqinisekiswa kobudala bePhonografi
NgoJuni 2020, iSiseko soMvuzo siququzelele inkomfa ebonakalayo yokuQinisekiswa kweMinyaka. Iqabane lethu eliphambili yayinguJohn Carr, i-OBE, uNobhala woMdibaniso wabantwana wase-UK woKhuseleko lwe-Intanethi. Isifundo yayisisidingo sokuqinisekisa ubudala bemithetho yephonografi. Umsitho ububandakanya abameli bezentlalontle yabantwana, amagqwetha, izifundiswa, amagosa karhulumente, iingcali zenzululwazi kunye neenkampani zetekhnoloji ezivela kumazwe angamashumi amabini anesithoba. Nantsi into epapashiweyo ingxelo yokugqibela.
Ubungqina bamva nje obuvela kwicandelo le-neuroscience libonisa iziphumo zokuvezwa kakhulu kwimifanekiso engamanyala kwingqondo yomntwana ofikisayo
Iiakhawunti ezivela kumazwe angaphezu kwamashumi amabini malunga nokuba umgaqo-nkqubo woluntu uphuhla njani malunga nokuqinisekiswa kobudala kwi-Intanethi kwiwebhu
Iitekhnoloji ezahlukeneyo ngoku ziyafumaneka ukwenza ukuqinisekiswa kobudala ngexesha elifanelekileyo
Iindlela zokufundisa zokukhusela abantwana ukuze bahambisane nezisombululo zobugcisa
Abantwana banelungelo lokukhuselwa engozini kwaye amazwe anoxanduva olusemthethweni lokubonelela. Ngaphezu koko, abantwana banelungelo elisemthethweni lokufumana iingcebiso ezifanelekileyo. Kwaye ilungelo lokufunda ngokubanzi, ubudala obufanelekileyo ngesondo kunye nendima elinokudlala ngayo kubudlelwane obusempilweni, obonwabisayo. Oku kubonelelwa ngcono kwimeko-sikhokelo yezempilo noluntu. Abantwana abanalungelo elisemthethweni lokufumana iphonografi.
Itekhnoloji yokuqinisekisa ubudala iqhubele phambili ukuya kwinqanaba apho iinkqubo ezinokufikeleleka, ezifikelelekayo zikhona. Banokuthintela ukufikelela phantsi kwe-18s kwiindawo ze-intanethi ezikwi-intanethi. Ikwenza oku ngeli xesha kwangaxeshanye ihlonipha amalungelo abucala abantu abadala kunye nabantwana.
Ukuqinisekiswa kobudala akuyiyo i-bullet yesilivere, kodwa ngokuqinisekileyo kunjalo a imbumbulu. Kwaye kuyimbumbulu ejolise ngqo ekuchaseni abakhwebi kwi-Intanethi yeli lizwe nayiphi na inxaxheba ekuqinisekiseni ubudlelwane bezesondo okanye imfundo yezesondo yabaselula.
Urhulumente phantsi koxinzelelo kulandela isigqibo seNkundla ePhakamileyo
Into ekuphela kwayo yokuzisola e-UK okwangoku asikabi nalo nofifi lokuba amanyathelo okuqinisekisa ubudala ekuvunyelwene ngawo yiPalamente ngo-2017 aza kuqala nini ukusebenza. Kwiveki ephelileyo sigqibo kwiNkundla ePhakamileyo inokuthi isishukumisele phambili.
Utshilo uJohn Carr, OBE, “E-UK, ndiye ndacela uMkomishinala woLwazi ukuba aqalise uphando ngenjongo yokufumana intsholongwane yokuqala yokuqinisekiswa kobudala, ukukhusela impilo yengqondo nentlalo-ntle yabantwana bethu. Kwihlabathi liphela, oogxa bethu, izazinzulu, abenzi bomgaqo-nkqubo, izisa, amagqwetha nabantu abakukhathaleleyo ukukhuselwa kwabantwana benza ngokufanayo njengoko le ngxelo yenkomfa ibonakalisa. Lixesha lokuba uthathe into ngoku. ”